Miteraka Ahiahy Momba Ny Fahalalahana Miteny Ao Venezoela Ny Fitazonana Am-ponja ilay Talen’ny Tranonkalam-Baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2016 7:00 GMT
“‘Avoahy i Braulio Jatar. Tsy heloha bevava ny fanomezana vaovao” Sary nampiasain'ny hetsika fanentanana mitaky ny fahafahan'i Jatar ao amin'ny Twitter, nozaraina be amin'ny tambajotran-tserasera.
Taorian'ireo tahotra fanjavonana an-tery setra izay vetivety dia nameno ireo median'olontsotra tao Venezoela, nivoaka ny vaovao hoe any am-ponjan'ny sampam-pitsikilovava nasionaly (SEBIN) noho ny fiampanga azy ho manao famotsiam-bola ilay Shilianina-Venezoeliana mpanao gazety sady mpisolovava, Braulio Jatar, talen'ny tranonkala “Reporte Confidencial“.
Araka ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa aminy, tsy fantatra nandritra ny ora maro ny toerana nisy an'i Jatar ary tsy afaka nifandray izy, sady nanaovana fisavàna ny tranony. Ny anabaviny ihany koa dia niteny tamin'ny alalan'ny Twitter fa tsy navela hahazo fanafody ho an'ny areti-mitaiza azy i Jatar.
Ny fanjakana no tompon'andraikitra amin'ny fiainan'ny anadahiko. [Lahatsary miresaka] ny fahasalaman'ilay Shiliana-Venezoeliana mpanao gazety #BraulioJatar
Voatazona niaraka taminà olona hafa maherin'ny 30 i Jatar — izay afaka tao aoriana — nandritra ny hetsi-panoherana tao amin'ny faritr'i Villa Rosa, any amin'ny faritry ny nosy Nueva Esparta, ao avaratra atsinanan'i Venezoela. Ny 2 sy 3 Septambr, lasa nalaza tampoka ny tenifototra Villa Rosa tao amin'ny haino aman-jery sosialin'i Venezoela raha nanohitra ny fahatongavan'ny filoha Nicolás Maduro ny vahoaka.
Araka ny lazain'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy sy ireo lahatsary nozaraina an-tserasera, rehefa tonga tao Villa Rosa i Maduro, nidina an-dalambe ny mponina, nikapoka vilany sy lapoaly (karazana hetsi-panoherana antsoina hoe ”cacerolazo,” manondro ny ”cacerola” na vilany) ary farany nanery azy handao ny tanàna.
Raharaha nitranga taorian'ireo fihetsiketsehana tao amin'ny renivohitr'i Venezoela, izay nanaovan'ny olona an'arivony hetsi-panentanana hanaovana fitsapankevibahoaka hitsipahana an'i Maduro.
Inoan'ireo mpanohana an'i Jatar fa ny fandrakofan'ny tranonkalam-baovaony ny hetsi-panoherana tao Villa Rosa no tena antony maha-any an-trano maizina azy.
Ho an'i Tinedo Guía, Filohan'ny Fikambanana Nasionalin'ireo Mpanao Gazety, ilay fisamborana dia natao mba hampanginana ny Reporte Confidential an'i Jatar. Tao amin'ny tantara iray ao amin'ny Reporte Confidencial, nanazava ny mpisolovava an'i Jatar fa feno zavatra tsy nanjary ary fianìmoangàna diso ny dingana araka ny lalàna :
Nitatitra ny [mpisolovava an'i Jatar] fa tsy ara-dalàna ireo dingana narahan'ny fisamboarana, toy izany koa ireo fisehon-javatra nitranga taoriany. Nafindra tao amin'ny SEBIN [ny foiben'ny sampan-draharaha] izay nanadihadiana azy sy nanokafana ny antontan-taratasiny momba azy [i Jatar], tamin'ny tsy firaharahiana ireo fepetran'ny dingana fanao. Nilaza ny fisian'ny vavolombelona roa ry zareo, izay tsy hita teo an-toerana, ary nomarihany ny fisian'izay voalaza fa kitapo feno vola, izay tsy marina ihany koa.
Ny ahiahin'ny governemanta sy ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona ao Shily
Ny Kaomitin'ireo Fianakavian'ireo Niharam-boina (CoFaVic), vondrona iray natokana ho fiarovana ny zon'olombelona, manana ny biraony ao Caracas ary noforonina taorian'ireo andian-korontana fantatra amin'ny anarana hoe El Caracazo, izay ihany koa nandrisika ny governemanta mba hanitsy ireo tsy fanarahan-dalàna izay nahazo toerana nandritra ny fisamborana an'i Jatar. Ho an'ilay fikambanana, ny tsy fahazoana antoka ary ny fahanginana tamin'ny andro nialoha ny nanambaran'ny sampam-pitsikilovana ny nisamborany an'i Jatar ary gadra politika hafa dia azo jerena ho toy ny heloka bevava manoloana ny maha-olombelona, na dia mbola velona aza ireo olona resahana.
Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny ao Shily, Heraldo Muñoz, dia naneho ny ahiahiny ho an'ny fiarovana an'i Jatar ary nanome toky ny hifantoka tsara amin'ny zavatra mety hahazo an'i Jatar any Venezoela.
Nandritra izany fotoana izany, nanao sonia fanangonantsonia ny vondron'ireo Shiliana mpanao politika nitakiana ny hamotsoran'ny fanjakana Venezoeliana an'i Braulio Jatar. Araka ny tranonkalam-baovao Shiliana The Clinic, ny minisitra taloha nisahana ny Asam-bahoaka, Sergio Bitar, dia niteny hoe:
Azoko antoka fa ny 99% amin'ireo vahoaka shiliana no mitovy hevitra amintsika. Betsaka amin'ireo nanao sonia [ny taratasy nalefa ho an'i Maduro] no lasa an-tsesintany nandritra ny fanjakana jadon'i Pinochet, ary Venezoela dia nandray antsika tao anatin'ny demokrasian-dry zareo […] Tianay ny hisaotra izay demokrasia izay, niaro ny zo mitovy izay nanampian'ny Venezoeliana anay mba harovana…
Aty anaty serasera, ny tenifototra #LiberenaBraulioYa [Avoahy izao i Braulio] ary #BraulioJatar dia lasa mavitrika be ao amin'ny Twitter nanomboka ny fotoana nisamborana ary mampiseho tsara kokoa ny fahasimban'ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena:
Ny raharahan'i Braulio Jatar no ohatra tsara indrindra amin'ny maha-lasa ”be fepetra” ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Venezoela.
Mety hanampy ny lisitra tsy mitsaha-mitombon'ireo gadra politika i Jatar ary ireo dingana fitsarana atosiky ny politika eo ambain'ny fitantanan'i Nicolas Maduro. Araka ny tatitra isan-taona fanaon'ny Amnesty International, miatrika fanafihana sy fampitahorana ireo mpiaro ny zon'ny olombelona sy ny mpanao gazety ao Venezoela, ary ”niatrika fitsaràna nitanila sy fampidirana am-ponja tsy ara-drariny ireo mpanohitra ara-politika ny governemanta.”